चियासँग जोडिएका यी ६ अफवाहलाई तपाईं पनि मान्नुहुन्छ सही ? थाहा पाउनुहोस् वास्तविकता - Onlinenews Global
August 20, 2021 laxmiLeaveaComment on चियासँग जोडिएका यी ६ अफवाहलाई तपाईं पनि मान्नुहुन्छ सही ? थाहा पाउनुहोस् वास्तविकता
के तपाईं चियाको शौखिन हुनुहुन्छ ? धेरैजसो मानिसहरुलाई चिया असाध्यै मनपर्छ । यहाँसम्म कि धेरैजसोले आफ्नो दिनको सुरुवात चियाबाटै गर्छन् । यतिमात्रै होइन, धेरै ानिसहरु चिन्ता, तनाव, टाउको दुखाईको स्थितिमा पनि चियालाई एउटा टोनिकको रुपमा पिउने गर्छन् । चिया विभिन्न प्रकारका हुन्छन् – दुध हालेको चिया, कालो चिया, ग्रीन टी । मानिसहरु आफ्नो रुची अनुसार यसको सेवन गर्छन् । हामी नेपाली घरमा चियालाई असाध्यै महत्व दिन्छौं, यसैकारण मानिसहरु बीच योसँग जोडिएका अफवाह फैलिएका छन् । केही मानिसहरुलाई लाग्छ कि दुध चिया स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुन्छ, कतिले सोच्छन् ग्रीन टी पिउँदा तीब्र रुपमा तौल घट्छ । यस्तै कतिलाई लाग्छ कि चियाको कुनै एक्सपायरी डेट हुँदैन । साथै कतिलाई लाग्छ कि चिया एउटा हाइड्रेटिङ पेय पदार्थ हो । यदि तपाईं पनि यी अफवाहलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने यसको वास्तविकताबारे थाहा पाउनुहोस् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
ग्रीन टीका साथै कालो चियामा पनि असाध्यै राम्रो मात्रामा एन्टीअक्सिडेन्ट पाइन्छ । ग्रीन टीले स्वास्थ्यलाई थुप्रै लाभ प्रदान गर्छ । दुबैमा लगभग एकै प्रकारको पोषक तत्व पाइन्छ । यी दुईबीच रङ्गको मात्रै फरक हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । ग्रीन टी ब्ल्याक टीभन्दा बढी चर्चित छ । मानिसहरु कालो चियाभन्दा ग्रीन टी पिउन रुचाउँछन् । तर दुबैमा एकै किसिमको पोषक तत्व पाइन्छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****